Ceelafweyn - Wikipedia
Town in Sanaag, SomalilandTemplate:SHORTDESC:Town in Sanaag, Somaliland
aasaasay maxamed nuur (Sacad Yonis) mayor 1940-1951
Mohamed Aaden Digale
Ceel-Afweyn waa magaalo ku taalo gobolka sanaag, gaar ahaan waxay ku taala koonfurta galbaad ee Ceerigaabo. Waxa dega beelaha muuse abokor iyo Beelaha H.yoonis (Garxajis) gaarahaan faarax biciide Habar Jeclo, Muuse Abokor, gaar ahan Beelaha Biciide iyo Beesha Yoonis Ismail (Sacad Yoonis) Gaar ahaan Beesha Idarays, Beesha Jibriil Xasan Sacad, iyo Beelaha Biciido ee kala ah beesha Baho , beesha Ahmed Farah , beesha iidle biciide iyo inyar oo kamida, Reeriidle, sidokale Waxay magaladu leedahay Gola degaan oo ka kooba 11 xubnood. Oo u guddomiye u yahay Maxamed Aadan Digaale Iyo Maxamed Jaamac Liibaan. Magaladu waxay leedahay xeeb, buuraha Golis iyo banaano xoola daaqeen ah. Waxay caan ku tahay faleenka ,sida beeyada iyo malmalka. Dhulka buuraha leh waxaa jira togog durdur ah oo laga beero khudaarta oo kala duwan .Degaanka buuraleyda Guban waxaa laga helaa Dhuxul- dhagaxda oo aan weli si wacan looga faa-iidaysan iyo xabag god oo sanadahan dambe aad loola soo baxo ganacsi weyna leh. Xoolaha nool iyo ugaadha ayay degmadu hodan ku tahay.
Ceel-Afweyn waxay hodan ku tahay Sida ay sheegeen odayaasha wax garadka ah ee degaanka waxaa magaalada Ceel-Afweyn la aasaasay sanadka la odhan jirey Hawa- rida oo ku beegnaa 1936. Waxaa dhismihii u horeeyey meesha magaaladu hadda tahay taagey Xaaji Cige oo Yaxye ahaa (Yaxye Habar'waa) kadibna markii Xajji Cige Ka Guuray waxa Soo degay oo Xajji Cige ka iibiyey Guryihiisii Xaaji Liibaan Cumar sidoo kale waxa Cariishyadii ugu Horeeyey ka dhistay Xaaji Liibaan iyo M Moxamed Muuse Moxamed ( Moxamed Dheere).
Liiska xildhibaanada golaha deegaanka ceelafweyn waa 11 xildhibaan kuwaasoo kasoo baxay xisbiyo kaladuwan waxayna kala yihiin sida tan:
1. Maxamed Aadan Digaale 2. Maxamed Jaamac Liibaan 3.C/laahi Yaasiin Cali 4.Axmed Claahi Xaydh dac 5.C/laahi Axmed Abyan 6.axmed Sablaalei 7.Jaamac 8.Warsame Dararweyne 9.Cilmi kulule 10.Cige Xuseen 11.axmed Xuseen Cige dhagajuun
Ceel-Afweyn waxay ku taala koonfurta galbaad ee Ceerigaabo. Waxay dhacdaa lat.9.55 long.47.15 .Waxay leedahay xeeb, buuraha Golis iyo banaano xoola daaqeen ah. Waxay caan ku tahay faleenka ,sida beeyada iyo malmalka. Dhulka buuraha leh waxaa jira togog durdur ah oo laga beero khudaarta oo kala duwan .Degaanka buuraleyda Guban waxaa laga helaa Dhuxul- dhagaxda oo aan weli si wacan looga faa-iidaysan iyo xabag god oo sanadahan dambe aad loola soo baxo ganacsi weyna leh. Xoolaha nool iyo ugaadha ayay degmadu hodan ku tahay.
Taariikhda degmada[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Sida ay sheegeen odayaasha wax garadka ah ee degaanka waxaa magaalada Ceel-Afweyn la aasaasay sanadka la odhan jirey Hawa- rida oo ku beegnaa 1936. Waxaa dhismihii u horeeyey meesha magaaladu hadda tahay taagey Xajji Liibaan Cumar iyo Moxamed Muuse Moxamed ( Moxamed Dheere ) oo xijaabtey 9/2/1951, Waxaa nool ragii sarabkii u horeeyey u soo guray.Waxaa dabadeed headman looga dhigay Cali Muuse Cigaal.
Hase ahaatee 1919 oo loo yiqiin sanadkii Dayuuradda ayaa ceelka magaalada oo la baxay Ceel-Afweyn Agtiisa(dhinaca bari) waxaa soo degey ciidan Ingiriis ah oo la dagaalamaayey Ina Cabduulle Xasan iyo Daraawiish. Ciidankaas waxaa hogaaminaayey Col.Ismey sida uu sheegay M.Beachy Rey oo qoray Buuga ( Aflame in the Horn), Raadadkii degaank xaruntooda iyo goobihii dab-ridka weli way sii muuqdaan . kurta bigidhka weli waxay wadataa magacii waagaa loo bixiyey .Waxay ahayd meesha bigilka ciidamada looga garaaco marka la soo ururinaayo. Niman dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen Chief/Caaqil Moxamed Nuur,Jaamac Moxamed iyo Xaaji Cige Cabdull Aw Xasan ayaa waabo ganacsi ku haystey meel u dhow xarunta ciidamada. Hase ahaatee markii la jebiyey Ina Cabdull Xasan waa laga guurey Xaruntii ciidanka iyo goobihii ganacsigaba. Hadaba markii uu Moxamed dheere soo degey meesha ay magaaladu hadda tahay 1936 ayaa waxaa la soo degey mudo yar ka dib Moxamed Nuur, Xaaji Cige, moxamed Ducaale dhuux iyo rag kale oo aan la koob i Karin. Sidaasayna magaalo ku noqotay.
Dhacdooyinka Muhiimka ah[wax ka badal | wax ka badal xogta]
1950 Waxaa magaalada laga sameeyey xarun gargaar markii ay dhacday abaartii la baxday siiga case. Xarunta gargaarka waxaa madax ka ahayd naag Ingiriis ah oo la Odhan jirey Marian Shelly oo ahayd haweeneyda xoghayaha Badhasaabka dalka xukumey. Sanadkaas dad badan ayaa u le’day macaluul iyo cuduro. 1953 waxa dadweynahu dhistey dugsigii ugu horeeyey degmada ,Dawladuna waxay keentay macalimiintii iyo qalabkii waxbarashada. Ardaydana waxaa loo xidhay seere ay u daaqaan geelu.Dhismaha dugsiga iyo horumarinta degaanka waxaa qayb weyn ka qaatay odayaal ay hogaaminaayeen Moxamed X.Ducaale .Axmed Muuse (Waraabe) Nuux Moxamed , Jaamac Faarax, Xaaji Yusuf Moxamed Aw-daahir Ducaale, ,Digaale Jaamac, JaamacXagar, Warsame Siiid,Aw Cabdi Muse iyo Axmed JaamaFaarax (Dheere). Alle ha naxariistu gedigood,Aamiin. Baabuurkii Cali Muuse (Gardam) ayaa dhismaha magaalada si weyn uga qayb qaatay.Waana baabuurkii u horeeyey oo ay degmadu yeelato. 1954 waxaa magaalada lagu magcaabay sub-District waxaana laga dhisya xafiisyo dhowr ah : 1.-Rest house 2.	Police Office 3.	Subordinate court 4.	Forestry Office	5.	Lifestock dip 6..civil centre	.Isla sanadkaas waxaa dhacay (nasiib daro) dagaal sokeeyey oo dhexmaray beelo ka ka mid Isaaq iyo kuwo ka mid Dhulbahante., Taasi waxay keentay in dhulbahantii yiiley C/Afwein oo uu ka mid ahaa Xaaji Cige ay ka guuraan C/Afweyn dabadeedna uu guryahoodii iibsadey X.Liibaan Cumar oo ka mid noqday ragii magaalada soo camiray. Dadweynaha degaanku waxuu qayb weyn ka qaatay dagaalkii gobanimo doonka ee Gumaysigii Ingiriiska lagu kicinayey waxaana u dhintay Sh.Cabdulaahi Ducaale oo lagu dilay Arab 1946 isagoo hogaminaaya dadweynihii diidanaa in suntan ayaxa dhulka lagu shubo. Labadii Xisbi ee SNL iyo NUF way ka furnaayeen Ceel-Afweyn. Guubaabada dadweynaha waxa hormood ka ahaa dhinaca suugaanta Aw Cabdi Muuse iyo Ibraahim Xirsi Diiriye, Halkudhegyadiisii waxa ka mid ahaa : -Odayaal kasmaloo kimidhaa la rabaa Kaftankii ma jiroo koday saarantahee Kaca yaa wadanii Dorashadii 17 February ee 1960 ee Baarlimaankii u horeeyey hal kursi ayuu helay xisbigii NUF ,waxaana ku guulestey Michel Mariano oo Ceel-Afweyn ka sharaxnaa .Kuraastii kale oo dhamaan 32 waxaa helay xisbiyadii SNL iyo USP. 1975 ayaa Dawladii Kacaanka M.S.Bare Ceel-Afweyn la siiyey Degmo buuxda.Waa sanadkii ay dhacday dabadheer oo dadkii qaarna loo raray Jubooyinka qaarna xeryo gargaar looga furay Bixin.Waa degmada qudha ee Waqooyi looga furay gargaar. Waxaa xeradaas maamulaayey Ismaaciil Faarax Moxamed . Abaartaasi sidii Siiga case ayay galaafatay boqolaal nafood . 1980 ayaa dadweynaha degmadu dhisteen Dugsiga Sare iyagoo u qaybsaday Ishaashatooyin iyo xaafad- xaafad,Dawladuna gacan bay ka geysatey . 1989 waxaa degaanka C/Afweyn ka dhacay xasuuqyo ay geesteen ciidamadii Siyaad Bare oo gaadhaya in ka badan 250 ruux.waxayna ka dhaceen agagaarka C.Afweyn sida Karin Biyood,Bohol ,Kalshiikh.Danweyn,gaad iyo meelo kale . Waxaa degmada ku abtirsada Aqoonyahano ,Siyaasiin .iyo hogaamiyaal caan ah oo fara badan oo aanaan halkan ku soo koobi KarinWaxaa degmada jooga laba isgaadhsiin mTelesom iyo Somtel iyo sherkado horumarineed sidaa CARE International, Heal Organzation, KAVO NRC iyo qaar kaloo badan oo wax weyn ka qabatay degmada iyadoo dhistey Berkado ,suuliyon health posts. Village rest houses canals for rain irrigation farms iyo bunds lagaga hortegaayo carra guurka.,Hayada Care international ayaa dugsiyo badan ka dhistey degmada. Waxaan iyana la ilaawi karay hayadaha NRC iyo IAS oo iyana dhowr dugsi degmada ka dhistay. Degmada waxaa horumarkeeda ragaadiyey Shaqaaqooyinkii iyo Dagaaladii sokeeye ee dhexmaray Beelaha waa wayn ee Degmada Dega sanadkii 2020. Sidoo kale jidkii iyo Wadadii Uu bilaabay Madaxwaynihii hore JSL meel wanaagsan bay maraysaa Xukuumadan Madaxwayne Muusena way ku Amaanantahay.
Jama Abdi Muse jamamuse@hotmail.com waxa caan ku tahay dhinac gelbad waxaaa ka yala buuro badan 20.06.2014
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceelafweyn&oldid=216619"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Sebteembar 2021, marka ee eheed 07:48.